Abafundi kwiYunivesithi yaseGeorgia yaseMazantsi batshise incwadi kaJennine Capó Crucet emva kweNtetho yakhe - Usnews
Iqela labafundi litshise iNcwadi yoMbhali waseLatina kuba beziva behlaselwe ngenxa yokuba bamhlophe
Iqela labafundi beyunivesithi kawonke-wonke eGeorgia enabantu abaninzi abamhlophe batshise incwadi yombhali wesiLatini owayenikele intetho ekhampasini emva kokuba abanye ababekho bamtyhola 'ngokuchitha abantu abamhlophe.'
UJennine Capó Crucet, umnikeli weNew York Times kunye nonjingalwazi osebenza naye kwiDyunivesithi yaseNebraska, uthethe ngenoveli yakhe. Yenza Ikhaya Lakho Phakathi Kwabantu Basemzini kwiYunivesithi yaseGeorgia yaseMazantsi ngoLwesithathu ebusuku. Incwadi ephumelele ibhaso, ipapashwe ngo-2015 , ibalisa ibali lentombazana yaseCuba yaseMelika yaseMiami eyamkelwa kwikholeji edumileyo eNew York kwaye izabalazela ukungena kwindawo enelungelo, ikakhulu emhlophe.
Le ncwadi yayifunwa ukuba ifundwe kwezinye zeeklasi zamava oNyaka wokuQala waseGeorgia, ngokutsho kweyunivesithi.
Ngorhatya lwangoLwesithathu, kwesi sikolo kwaqhutywa uCrucet, owayethetha neklasi yabo bonke ababefunda unyaka wokuqala kwiziko lobugcisa bokudlala. Xa wayevula umgangatho ukuze abuze abaphulaphuli ngemibuzo, abanye ababekho bamngxolisa ngokugxeka abantu abamhlophe. ngokutsho kukaGeorge-Anne , iphephandaba lale yunivesithi.
Ndiqaphele ukuba wenze izinto ezininzi jikelele malunga noninzi lwabantu abamhlophe banelungelo, omnye umfundi watsho kumbhali, ngokutsho kwephepha. Yintoni ekwenza ukholelwe ukuba kulungile ukuza kwikhampasi yekholeji, ngolu hlobo, xa bekufanele ukuba sikhuthaze ukuhlukahluka kule campus, into esiyifundiswayo. Andiqondi ukuba yayiyintoni injongo yoku.
Ndizicaphukela izicwangciso zomgangatho ovulekileyo
Ephendula lo mfundi, uCrucet uthe wamenywa ukuba athethe eyunivesithi kwaye baxoxe ngelungelo labamhlophe kuba 'yinto yokwenyani oxhamla kuyo ngoku nokubuza lo mbuzo, ngokutsho kukaGeorge-Anne.
Impendulo yakhe ibangele imibuzo engakumbi malunga nobuhlanga kubaphulaphuli.
IMC chatel ithethe nabafundi abathandathu bonyaka wokuqala, abasetyhini abahlanu kunye nendoda enye, abebezimase le ntetho, bonke abacele ukungachazwa ngamagama. Abafundi kwakufuneka baye kuloo ntetho, bekunye namakhulu afunda nabo, yaye bathi uCrucet wahlasela abantu abamhlophe ‘kangangeyure’ waza wacinga ukuba bonke ababekho babenenyhweba.
'Weza esikolweni sethu yaye, abaphulaphuli babengabamhlophe ubukhulu becala, yaye wangena waza wahlasela abantu abamhlophe kangangeyure, ebeka zonke ezi ngcamango zingqongqo kuthi,' watsho omnye owayelapho oneminyaka eli-18 ubudala. 'Njengabo bonke abantu abamhlophe banamalungelo kunye nobuhlanga.'
Omnye umfundi uthe abaphulaphuli basabela xa umbhali esithi uninzi lwabantu abamhlophe 'kufuneka lususwe kwizikhundla zabasemagunyeni kuba isibini kwisithathu sabantu abakwizikhundla eziphezulu akufuneki babe mhlophe.'
'Wayefuna wonke umntu alingane kwaye esithi uchasene nobuhlanga kodwa wayebagxeka abantu abamhlophe ngalo lonke ixesha,' watsho lo mfundi oneminyaka eli-18 ubudala. 'Ndiyawuqonda umyalezo ebezama ukuwukhupha kodwa andiyazi ukuba ebelindele ukusabela njani xa efika kwisikolo esimhlophe nge-75%. Ndiyavuma ukuba kukho into ebizwa ngokuba lilungelo elimhlophe kodwa indlela awayethetha ngayo yayingalulungelanga umbutho wethu wabafundi.'
Bonke abafundi abathetha ngeMC chatel bazalelwa kwaye bakhulela eGeorgia. Omnye wabafundi uthe unesiqingatha seDominican; ezinye zimhlophe.
Emva kwesiganeko, uCrucet kutwetwe ukuba bekukho 'izimvo ezindlongondlongo nezingenalwazi' ngexesha le-Q&A yakhe kwaye wabulela 'abafundi abamangalisayo, abakrelekrele' abammelayo ngexesha lotshintshiselwano.
'Xa kwakutyikitywa, sawolana salila,' wabhala. 'Ndiyavuya ukubazi kwaye ndikwasemthethweni ndinexhala ngokhuseleko lwabo.'
Kwiimpendulo zakhe, abantu abaninzi ababekho kweso siganeko bamtyhola 'ngokuxhaphaza abantu abamhlophe.'
vela umthi wekrisimesi
'Esona sizathu sibangela ukuba kubekho nabani na ukuba abonakale kungenxa yokuba kwakufunwa kwaye emva kocalucalulo lobuhlanga owalubonakalisayo ngokuchasene nohlanga olumhlophe kufuneka sonke sibuyekezwe ngencwadi yakho. Ndingumlinganiso kodwa hayi intiyo oyibonisileyo, ”utshilo omnye umsebenzisi.
Kamva ngobo busuku, iqela labafundi lahlanganisana ekhampasini laza latshisa incwadi yakhe, ngokwengxelo evela eyunivesithi kunye neevidiyo ezifakwe kwi-Twitter. Abanye bade bahlanganisana ngaphandle kwehotele yakhe, isebe lesikolo lokuBhala kunye neLinguistics watsho kuFacebook , ebhala ukuba 'idanile yaye idanile ngenxa yesiphithiphithi esinxamnye' nombhali.
'Ingxoxo phezolo kunye nombhali ingene kwizityholo zokubonisa ubuhlanga kubantu abamhlophe,' utshilo uGqr. Russell Willerton, usihlalo wesebe, kwingxelo. 'Abanye abafundi batshise iikopi zencwadi kaCrucet baze bahlanganisana ngaphandle kwehotele yakhe. Siqinisekisa ukuba izenzo ezitshabalalisayo nezisongelayo azibonakalisi imilinganiselo yeYunivesithi yaseGeorgia yaseMzantsi.'
Umfundi eklasini - ocele ukuba igama lakhe lingasetyenziswa ngenxa yezizathu zokhuseleko - wayehamba ngaphandle kwendawo yokulala yase-Eagle Village xa ​​wathi wabona iqela labafundi litshisa into ethile.
'Bendicinga ukuba ibiyi-s'mores ekuqaleni,' umfundi okunyaka wokuqala uxelele I-MC chatel. 'Ngoko xa mna nabahlobo bam saya kubona ukuba yintoni na, sabona abafundi bekhwaza behleka bephosa iincwadi emlilweni.'
Kwividiyo, iqela liqokelelwe kwi-grill egcwele iikopi zencwadi kaCrucet, kwaye bayahleka.
Lo mfundi owenza izifundo zobunesi uthe xa ebuza oontanga bakhe ukuba kutheni belutshisela olu ncwadi bathi, 'kuba le ncwadi imbi.'
ngoko emva kokuba umbhali wencwadi yethu ye-FYE eze esikolweni sam ukuze athethe ngayo ... aba bantu banquma ukuyitshisa incwadi yakhe kuba imbi kwaye olo hlanga lubi ukuthetha ngalo. abantu abamhlophe kufuneka baqonde ukuba bayingxaki kwaye ilungelo labo liyityhefu. umbhali ngumfazi webala.
Xa bebuzwa malunga nokutshiswa kwencwadi, iqela labafundi bonyaka wokuqala abacele ukungachazwa ngamagama baxelele I-MC chatel ukuba malunga nama-20 ukuya kuma-30 abo bafunda nabo babehlanganisene ukutshisa le noveli emgodini womlilo.
imihombiso yetafile yonyaka omtsha
Kwisiteyitimenti esinikwe iMC chatel, uCrucet uthe emva komsitho abamkeli zindwendwe bakhe bamsusile kwindawo abehlala kuyo bamsa kwenye ihotele ekwidolophu eyahlukileyo.
Kuphela kuxa wafunda ingxelo evela kusihlalo wesebe apho wafunda ukuba abafundi babehlanganisene ngaphandle kwehotele awayecebe ukuhlala kuyo ngaphambili.
'Ngexesha lomsitho, kwaye emva koko ngexesha lokusayinwa kwencwadi, abafundi abaninzi baye baphawula malunga nokuba lingakanani ibali lomlinganiswa oyintloko wenoveli elibonisa elabo,
kwaye babonisa umbulelo ngale ncwadi-kokubini kum ngokuyibhala, kunye ne-GSU ngokuyikhetha njengoko iFYE yabo ifundwa, 'utshilo uCrucet. 'Ukucinga ukuba abo bafundi babebukele njengeqela loontanga babo batshisa elo bali-ukubacima ngokuphumelelayo kwikhampasi ekulindeleke ukuba bacinge ngayo njengendawo ekhuselekileyo-ivakalelwa kukuba.'
UCrucet wathumela i-tweet izihlandlo ezininzi malunga namava, ebhala, 'Kulapho sikhona, eMelika.'
khanyisa imihlobiso yomthi
UJennine Capó Crucet @crucet
Abafundi e-@GeorgiaSouthern bayitshisa ngokoqobo inoveli yam. Kulapho sikhoyo, Melika. https://t.co/CxhjuaBYcX
Kwiitweets ezicinyiweyo ngoku, abafundi bonyaka wokuqala baphendule umbhali ngokukrazula iikopi zencwadi yakhe kunye nevidiyo yabantu abakhanyisela amaphepha ngomlilo.
Abanye abafundi, nangona kunjalo, baye balandela uCrucet, bembulela ngokuza kwakhe kwikhampasi yabo kwaye becela uxolo ngento adlule kuyo. Umfundi osemncinci waseGeorgia, ofunda imbali, wathumela i-imeyile kwi-MC chatel kwaye wathi abafundi abaninzi kwikhampasi 'baphoxekile ngaba bafundi batshisa iincwadi.'
'Sikwaphoxekile lulawulo lwethu, njengoko iziganeko zokungavisisani ngokobuhlanga zenzekile kwixesha elidlulileyo (into ebonakala ngathi yinto ephantse yabakho minyaka le ngoku),' ubhale watsho. 'Umphathi weyunivesithi akazange abaqeqeshe ngokwenene abo babandakanyekayo, nto leyo ekhokelela ekubeni kubekho iziphumo ezincinci zokunqanda ezo ziganeko ukuba zenzeke kwakhona.'
Ngelixa uninzi lwamasebe ale yunivesithi likugxekile ukutshiswa kwencwadi, uJohn Lester, usekela mongameli wezoNxibelelwano lweSicwangciso soNxibelelwano kunye neNtengiso, wathi 'abacwangcisi manyathelo ngakubo nabaphi na abafundi ababandakanyekayo kwesi siganeko.'
'Ngelixa kungaphakathi kwamalungelo abafundi' oLungiso lokuQala, ukutshiswa kwencwadi akuhambelani neenqobo zaseGeorgia zaseMzantsi kwaye akukhuthazi intetho yoluntu kunye nengxoxo yezimvo, 'utshilo uLester.
Kwi-imeyile kwi-faculty, uMongameli we-GSU uKyle Marrero wachaza iziganeko zangokuhlwa 'njengomzekelo wenkululeko yokuthetha.'
Ngokuthe ngqo kwiziganeko ezixeliweyo zangobo busuku, ngelixa kungaphakathi kwamalungelo oLungiso lokuQala lwabafundi, ukutshiswa kwencwadi akuhambelani nemilinganiselo yaseGeorgia yaseMzantsi kwaye akukhuthazi intetho yoluntu kunye nengxoxo yezimvo, 'ubhale uMarrero.
Wahlabela mgama esithi unqwenela ukuba abafundi 'babe nenxaxheba kwingxubusho esengqiqweni' nokuba 'ezi ngxubusho azikhange zibe mbi okanye zikhokelele kwintetho ephangaleleyo ezoba umfanekiso ombi ngeyunivesithi yethu.'
Uprofesa onikeze i-imeyile kwi-MC chatel uthe amalungu e-faculty 'awanelisekanga kakhulu ngale mpendulo.'
UCrucet bekufanele anikeze enye intetho ngoLwesine kwi-campus yase-Armstrong yeyunivesithi, kodwa isikolo sacinywa 'ngenxa yeemeko ezingalindelekanga.'
Nangona iGeorgia yaseMzantsi 63% abamhlophe , phantse ikota yabafundi bamnyama kwaye i-6% ngamaHispanic. Kwisiteyitimenti, iziko leengcebiso zesikolo lithe 'inabasebenzi abahlukeneyo beekliniki abalungele ukuxhasa iimfuno zeemvakalelo zabafundi.'
'Siyaqonda ukuba iziganeko ezinjalo zinokuphazamisa abafundi baseLatinx / baseSpanishi kunye nolunye uluntu olungenanto,' latsho iziko.
kwikhabhathi yokugcina igumbi igumbi
Kwingxelo yakhe, uCrucet umemelele iyunivesithi ukuba ixhase abafundi abanokuthi bazive bengakhuselekanga ngenxa yesi sehlo.
'Le ncwadi yaqala njengesenzo sothando kunye nokuzama ukuqonda okunzulu,' utshilo uCrucet. Ndiyathemba ukuba i-GSU inokwenza kwindawo enye kwaye isebenze ukuqinisekisa ubuntu babafundi abanokuthi bazive bengakhuselekanga emva kwesiganeko kunye nokutshiswa kwencwadi, nokuba ikhampasi iqhubekile nencoko enzima neyimfuneko eyaqala kuloo holo. .'
Umfundi eklasini othi ubone ukutsha uthe wothukile kwaye utyhafile zizinto ezenzeke ngethuba le sifundo, awathi ‘zilungile kwaye zifundisa’ kwanento yokuba abafundi bayitshise inoveli yombhali.
“Abafundi bebefuna ukuba athethe ngakumbi ngale ncwadi ngezinto zelungelo elimhlophe kodwa ndicinga ukuba ukuthetha ngaloo nto kungene ngokugqibeleleyo kuba le ncwadi ibisekwe kubomi bakhe namava akhe ngelungelo elimhlophe okanye ukusilela,” umfundi wonyaka wokuqala. watsho. 'Ngumfazi waseLatina.'
ipeyinti eluhlaza ekhitshini
yeyona ndawo indala emhlabeni
ezintlanu kunye neevenkile zedime
uyilo lwangaphakathi lwangoku lwe-rustic